polisimpirenena Archives - Book News Madagascar
Fifamoivoizana – Mametraka paikady vaovao hampihenàna ny fitohanana ny polisim-pirenena
Tsy mitsaha-mitombo ny fitohanana eto an-drenivohitra. Manoloana izany dia mametraka paikady vaovao hampihenàna izany ny polisim-pirenena. Paikady vaovao hampihenàna ny fitohanana Taorian’ny fanentanana sesilany nataon’ny polisim-pirenena ho an’ireo mpampiasa lalana dia nisy ny paikady vaovao napetraky ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police Rafanomezantsoa Roger, amin’ny fampihenana ny Read more…
By Book News, 9 months 5 months ago
Ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy : polisim-pirenena 16 no nahazo fiofanana avy amin’ny Ecpat France.
Ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy. Nanome fampiofanana polisy 16 mianadahy ny Ecpat France. Fiofanana avy amin’ny Ecpat France Mbola maro ireo ankizy iharan’ny herisetra mamoafady eto amintsika. Noho izany nisy ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ireo polisim-pirenena niarahana tamin’ny Ecpat France ny herinandro teny amin’ny FIP Antanimora. Fiofanana momban’ny “fiarovana ny Read more…